Ndị na-anakọta anyanwụ: njirimara, ojiji na ọrụ | Green Renewables
na ndị na-anakọta anyanwụ Ndị na-anakọta okpomọkụ, nke a makwaara dị ka ndị na-anakọta okpomọkụ anyanwụ, bụ akụkụ dị mkpa nke nrụnye ọkụ anyanwụ. Onye na-anakọta anyanwụ bụ ụdị akụkụ anyanwụ nke na-ahụ maka ịweta radieshon anyanwụ na ịtụgharị ya ka ọ bụrụ ike ọkụ. Ya mere, ụdị ume ọhụrụ a na-akpọ ike ọkụ ọkụ anyanwụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ndị na-anakọta anyanwụ, àgwà ha na ojiji ha.
1 Kedu ihe bụ ndị na-anakọta anyanwụ
2 Ụdị ndị na-anakọta anyanwụ
3 Akụkụ nke ndị na-anakọta anyanwụ
Kedu ihe bụ ndị na-anakọta anyanwụ
Ebumnuche nke ụdị panel nke anyanwụ bụ iji gbanwee ike: ụzarị anyanwụ nke modul anyanwụ na-enweta na-agbanwe ghọọ okpomọkụ. N'ụdị ụfọdụ nke nrụnye ọkụ nke anyanwụ, ọkụ a a na-eji ya emepụta uzuoku ma nweta ọkụ eletrik, ma nke a abụghị ọrụ nke onye na-anakọta anyanwụ. N'aka nke ọzọ, ogwe fotovoltaic nwere ike ịmepụta ọkụ eletrik ozugbo n'ụdị nke ugbu a. Ogwe fotovoltaic bụ ihe dị mkpa na nrụnye anyanwụ nke fotovoltaic.
Site n'echiche anụ ahụ, ndị na-anakọta anyanwụ na-eji thermodynamics maka ntụgharị ike. N'ụzọ dị iche, ogwe fotovoltaic anaghị eji iwu nke thermodynamics gbanwee ike anyanwụ, kama ọ bụ usoro eletrik.
Ụdị ndị na-anakọta anyanwụ
Enwere ọtụtụ ụdị ndị na-anakọta anyanwụ. Onye na-anakọta anyanwụ na-eji ga-adabere na ebumnuche ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ikpo ọkụ ọdọ mmiri na okpomọkụ nke 25-28 Celsius n'oge opupu ihe ubi, anyị chọrọ onye na-anakọta anyanwụ dị mfe, n'ihi na ọnọdụ okpomọkụ nwere ike iru n'usoro a ma ọ bụ karịa. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ikpo mmiri ahụ na okpomọkụ nke 200ºC, anyị ga-achọ onye nchịkọta anyanwụ na-etinye uche iji nakọta radieshon anyanwụ ma nyefee ya na obere mmiri mmiri.
Ugbu a, na ahịa anyanwụ, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị iche iche nke ndị na-anakọta anyanwụ:
Ndị na-anakọta anyanwụ dị larịị ma ọ bụ dị larịị. Ụdị akụkụ anyanwụ a na-ejide radieshon anyanwụ nke elu na-enweta iji kpoo mmiri mmiri. A na-ejikarị mmetụta griin haus weghara okpomọkụ.
Ndị na-anakọta anyanwụ iji jide radieshon anyanwụ. Ụdị onye na-anakọta ihe a na-ejide radieshon a na-enweta n'elu nnukwu elu ma na-etinye uche ya na obere elu site na enyo.
Onye na-anakọta anyanwụ na tube agụụ. Nke a na-anakọta anyanwụ na-agụnye ihe nkedo nke tubes cylindrical, nke ndị na-emepụta ihe na-ahọrọ, nke dị na oche nke reflector na gburugburu cylinder transperent iko gbara ya gburugburu.
N'ime ngwa anwụ dị ala, a na-eji ndị na-anakọta anyanwụ eme ihe nke ukwuu. Mgbe okpomọkụ nke mmiri mmiri na-arụ ọrụ dị n'okpuru 80ºC, a na-ewere na a na-eme ngwa ike anyanwụ na obere okpomọkụ, dị ka igwu mmiri na-ekpo ọkụ, mmepụta mmiri ọkụ ụlọ na ọbụna kpo oku. Enwere ike iji efere ndị a na-enweghị ma ọ bụ na-enweghị mkpuchi iko, dabere na ngwa ahụ.
Akụkụ nke ndị na-anakọta anyanwụ
Ọkọlọtọ mkpokọta anyanwụ bụ ihe ndị a mejupụtara:
N'elu: Ihe mkpuchi nke onye na-anakọta anyanwụ na-apụta ìhè, ọ nwere ike ịbụ ma ọ bụ na ọ gaghị adị. A na-ejikarị iko eme ya, ọ bụ ezie na a na-ejikwa plastik n'ihi na ọ dị ọnụ ala ma dị mfe ijikwa, ma ọ ghaghị ịbụ plastik pụrụ iche. Ọrụ ya bụ ibelata mfu n'ihi convection na radieshon, ya mere ọ ga-enwerịrị ike ibufe anyanwụ kachasị elu. Ọnụnọ nke mkpuchi ahụ na-eme ka arụ ọrụ thermodynamic nke akụkụ anyanwụ.
Ọwa ikuku: Ọ bụ oghere (ihe efu ma ọ bụ ihe efu) na-ekewapụta mkpuchi na bọọdụ nnabata. A ga-echebara ya echiche mgbe ị na-agbakọ ọkpụrụkpụ ya iji dozie mfu nke convection kpatara na oke okpomọkụ nke nwere ike ime ma ọ bụrụ na ọ dị warara.
Plate na-amị amị: Efere na-amị amị bụ ihe na-amịkọrọ ike anyanwụ ma na-ebufe ya na mmiri mmiri na-ekesa site na pipeline. Isi njirimara nke osisi ahụ bụ na ọ ghaghị inwe nnukwu nnabata nke ike anyanwụ na radieshon dị ala. Ebe ọ bụ na ihe ndị nkịtị anaghị emezu ihe a chọrọ, a na-eji ihe ejikọtara ọnụ nweta oke absorption / emission kacha mma.
Ọkụ ma ọ bụ ọkpọkọ: Ọkpụkpọ ndị a na-akpakọrịta na efere absorption (mgbe ụfọdụ welded) iji gbanwee ike na nke kachasị. N'ihe gbasara ọkpọkọ, mmiri mmiri ga-ekpo ọkụ ma banye na tankị nchịkọta.
oyi akwa mkpuchi: Ebumnuche nke mkpuchi mkpuchi bụ ikpuchi usoro iji zere ma belata mfu. N'ihi na mkpuchi bụ ihe kachasị mma, ihe mkpuchi ahụ ga-enwerịrị ihe nrụpụta ọkụ dị ala iji belata nnyefe thermodynamic nke okpomọkụ n'èzí.
Mgbakọ: The accumulator bụ ihe nhọrọ nhọrọ, mgbe ụfọdụ ọ bụ akụkụ dị mkpa nke anyanwụ panel, n'ọnọdụ ndị a ọ na-adịkarị n'elu ma ọ bụ ozugbo visual ubi. N'ọtụtụ ọnọdụ, batrị abụghị akụkụ nke panel nke anyanwụ, kama nke usoro okpomọkụ.
A na-ejikarị ndị na-anakọta anyanwụ na-ebunye mmiri ọkụ na ikpo ọkụ n'ụlọ ma ọ bụ na-emepụta ọkụ eletrik.
Maka ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ụlọ na ndị na-anakọta ọkụ, tank mmiri na-echekwa mmiri ụlọ na kọntaktị na mmiri mmiri site na eriri igwe. Igwe mmiri na-enye ohere ka mmiri ahụ nyefee ike ọkụ echekwara na mmiri na-emetọghị mmiri ahụ. Enwere ike iji mmiri a dị ka mmiri ọkụ nke ụlọ (80% ntinye), a pụkwara iji ya gbakwunye ọkụ n'okpuru ụlọ (10% ntinye). Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ike inye nnukwu mmiri ọkụ, Ma n'ihi enweghị ike nke ike anyanwụ, ha enweghị ike dochie kpamkpam usoro ikpo ọkụ ndị a na-emekarị.
Ndị na-anakọta anyanwụ bụ ndị a na-eji emepụta ọkụ eletrik kwesịrị ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ ka ọ bụrụ obụpde. Ozugbo mmiri ahụ mezuru mgbanwe mgbanwe nke thermodynamic wee banye na gas gas, a na-eziga ya na turbine thermoelectric., nke na-agbanwe mmegharị nke vepo mmiri ka ọ bụrụ ọkụ eletrik. A na-akpọ ụdị usoro a nke anyanwụ thermodynamics na ọ na-achọ ohere dị ukwuu iji wụnye oghere anyanwụ na anyanwụ na-aga n'ihu. Ihe atụ nke osisi ndị a ka etinyere n'ime ọzara.
Mgbe ị na-akọwa ma na-etinye ntinye ọkụ ọkụ nke anyanwụ, a ghaghị iburu n'uche na a ghaghị ekesa ndị na-anakọta anyanwụ n'ìgwè. Ndị otu ndị a na-anakọta anyanwụ Ha kwesịrị ịdị na-enwe nkeji otu ụdị ma kesaa ya n'otu n'otu dịka o kwere mee. Enwere nhọrọ abụọ bụ isi ma ọ bụ ụdị iji chịkọta ndị nchịkọta abụọ ma ọ bụ karịa: usoro ma ọ bụ myirịta. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịhazi ebe a na-anakọta mmiri site na ijikọta ìgwè abụọ, nke anyị na-akpọ sekit ma ọ bụ ngwakọta.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ndị na-anakọta anyanwụ na àgwà ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike Igwe fotovoltaic » Ndị na-anakọta anyanwụ